Fanatanterahana ny tetikasa: Hisy tetiandro mazava avokoa, hisy teti-bola ary ny tompon'andraikitra amin'izany
samedi, 23 juin 2018 09:26
Maro ireo tetikasa "Vitatsika io" nofaritana anatanterahana ny fampandrosoana isam-paritra eto Madagasikara.
Tsy mitovy amin'ny fomba fiasa hatramin'izay intsony, ka asa iray no vitaina vao miditra amin'ny iray hafa, tsy vita akory ilay faharoa dia efa potika ilay voalohany, dia hiverenana indray. Tsy misy fandrosoana mihitsy, sady asa ratsy, nefa andaniana vola be, izay lasa kolikoly no maro.
Hisy arak'izany tetiandro ho an'ireo asa rehetra, voafaritra avokoa ny tetibola sy ny famatsiam-bola isaky ny tetikasa, voafaritra ny tompn'andraikitra, hatrany amin'ny asa madinika indrindra, ho hita eo, iza no tsy mahavita ny anjarany ka hanatara na tsy ahavitan'ny asa mihitsy aza.
Hisy ny singa sy porofo (indicateur) amantarana ny asa vita, ireo asa azo alaina sary moa dia alaina sary, ahitana ny fandrosoan'ny asa. Ireny grand chantier ireny, fitrandrahana harena ankibon'ny tany, fanaovan-dalana, fanaovana complexe sportif, fambolena sy fiompiana goavana, raffinerie, fanamboarana ny canal de Pangalanes, famatsian-drano, ranomasina, dia hisy caméra de surveillance 24/24 - 7/7 avokoa.
Hisy toerana voatokana izany ahitana antsipirihany isa-minitra ny fandrosoan'ny asa rehetra, centre de contrôle avec tableau des indicateurs d'avancement des travaux en temps réel.
Misy amin'ireo fanaraha-maso ireo no azon'ny rehetra jerena amin'ny alalan'ny site internet na FB voatokana amin'izany.
Mazava ho azy, misy loko telo hipetraka:
- Maitso: mizotra ara-dalana ny asa, na ny tetiandro na ny vola mivoaka;
- Mavo: Misy fahatarana ny asa, na misy mihoatra ny vola nampiasaina;
- Mena: Tara be ny asa na tsy vita ka animba ny fahavitan'ny tetikasa mihitsy, tsy ara-dalana ny fivoaham-bola.
* Rehefa Maitso ny lokon'ny tetik'asa dia mahazo bonus ny mpiasa rehetra ao anatin'izany sampana izany.
* Rehefa Mavo dia misy ny fampitandremana sy fanatsarana aingana;
* Rehefa Mena dia misy sazy na fandroahana ny tompon'andraikitra mihitsy, na minisitra io na Filoham-pirenena.
Izay tsy mahavita ny andraikiny ao anatin'ny heri-taona voalohany dia miala, anisan'ny miala ny Filoham-pirenena raha toa tsy vitany ny anjarany.
SIM: Salon de l'Industrie de Madagascar andiany faha efatra »